Goolhaaye Alisson Becker oo amaan kala dul dhacay saaxiibkiis Virgil van Dijk – Gool FM
(England) 18 Juunyo 2019. Goolhayaha kooxda Liverpool ee Alisson Becker ayaa sheegay in saaxiibkiis Virgil van Dijk uu heysto tayo aad u sareysa, isagoo tilmaamay inuu yahay difaac gaar ah, isla markaana uu kalsooni siiyo saaxiibadiis Reds.
Alisson Becker ayaa ka warbixiyay doorka uu Virgil van Dijk ku lahaa kooxdiisa Liverpool xili ciyaareedka oo dhan wuxuuna yiri:
“Wuxuuna kalsooni weyn siinayaa kooxda iyo dhamaan ciyaartoyda, marka aad heysto ciyaaryahan weyn sidiisa oo kale ah wuxuu kaa joojinayaa halista kooxda kaa soo horjeeda, aniga ahaan waa ciyaaryahan weyn”.
“Waxaan kooxda ku heysanaa daafacyo aad u fiican, sida Joël Matip, Joe Gomez, Dejan Lovren, qof walbana wuxuu qabtay shaqo weyn xilli ciyaareedkan, laakiin Virgil wuxuu heystaa wax gaar ah”.
Alisson Becker ayaa xili ciyaareedka dhawaan dhamaaday wuxuu shabaqiisa ilaashaday 21 kulan, taasoo ka caawisay inuu ku guuleysto abaalmarinta Golden Glove, halka sidoo kale uu kooxdiisa Liverpool ka caawiyay inay ku guuleysato koobka Champions League.
Dhinaca kale Virgil van Dijk ayaa ku guuleystay abaalmarinta xiddiga sannadka ee Premier League, wuxuuna haatan si adag ugu sharaxan yahay ku guuleysiga Ballon d’Or 2019.